प्रेस स्वतन्त्रताको रिहर्सल गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छः बाँस्कोटा | Sagarmathakhabar
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष १७, २०७६ समय - २१:५१:०७
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयकका सन्दर्भमा नकारात्मक हल्ला फिँजाइएको आरोप लगाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विधेयकका विषयमा नकारात्मक हल्ला चलेको र भ्रम सिर्जना गरिएको आरोप लगाएका हुन् ।
‘हिजोमात्रै म पश्चिमबाट फर्किँदा नाम चलेका पत्रकारले के–के लेख्नुभएको छ ? मलाई व्यक्तिगत रुपमा लक्षित गर्नुभएको छ । मेरो आमाको निधन भइसक्यो, मलाई सोझै गाली गर्नुपर्‍यो नि । मेरो आमाको नाममा किन ? फलानाको छोरा, फलानीको छोरी ? यस्तो शब्द लेखेर कुन सभ्यता, स्वतन्त्रताको रिहर्सल गरेर नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्न खोज्दैछौं ? त्यस्ताहरुलाई कारबाही हुनुपर्दैन ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
पारिवारिक कुरा जोडेर असबन्धितलाई जे पनि भन्ने गरिएको देखिएको उनले बताए । ‘यो सामाजिक अपराधीकरणको एउटा विषय हो । अरुलाई जोडेर व्यर्थै मैले यो छोरो वा छोरी जन्माएछु भनेर निर्दोष बाबुआमा वा अरु कसैलाई किन मुछ्छौं, हामीरु यसमा स्वतन्त्रताको राग अलाप्ने कुराले केही पनि फरक पर्दैन। कराइराख्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। हामी पनि यसो भन्छौं।’
जायज कुराहरु विधेयकमा समेटेको उल्लेख गर्दै तथ्यहरु छोप्ने, भ्रमहरु सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाए।
सामाजिक सञ्जाल चलाउने हरेक नागरिक दर्ता हुनुपर्ने चर्चा चले पनि यथार्थ त्यस्तो नभएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ । ‘हाम्रोमा ९० लाख जतिले फेसबुक, ४० लाख जतिले ट्विटर र केहीले विच्याटसमेत चलाउने गरेका छन् । उनीहरु सबैले दर्ता गर्नुपर्ने हो कि जस्तो गरेर हल्ला मच्चाइएको छ,’ उनले भने, ‘म त्यसलाई ठाडै खारेज गर्छु ।’
उनले नेताहरुले बोल्दा कानुनी प्रबन्धभित्र रहेर बोल्नुपर्ने बताए ।
‘विधेयकमा जिस्काएको, होच्याएको मानमर्दन गरेको सन्दर्भमा सरकारले सबलाई तह लगाउन विधेयक ल्याइएको भनिएको छ । त्यस्तो होइन। हामी बेरोकतोक चलोस् भन्ने चाहन्छौं । खुला समाजको मान्यता चलोस् भन्ने चाहन्छौं । तर त्यहाँ एउटा कुरा लुकाइएको छ निरन्तर। छोप्नुको पनि सीमा हुन्छ । खुसुक्क खल्तीमा हालेर सरकारविरुद्ध नागरिकलाई उचाल्न सकिन्छ कि भनेर फोस्रो प्रयास सुरु भएको छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाको दाबी छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालले लेखे १५ लाख जरिबाना र ५ वर्ष कैदको कुरा आएको बताए । ‘लेख्नु कुनै अपराध होइन । तर, विधेयकको दफा ८८ को उपदफा १ मा कस्ता कुरा लेखेमा भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । कस्ता कुराको प्रचार गरेमा भन्ने कुरा खुलस्त छ । स्वतन्त्रता छ भनेर सबैलाई जे पनि भन्ने ?’
सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरा बेतुकको हल्ला मात्रै: मन्त्री बास्कोटा
प्रधानमन्त्रीले अरुलाई होच्याउन मिल्ने, आफुलाई आलोचना गरे दण्ड दिने: गगन थापा
मिडिया प्रति प्रधानमन्त्रीको आक्रोश, बाबु, हजुरबा, हजुरआमालाई पनि तिमी भन्ने